थकाइ लागिरहन्छ ? यस्ता छन्, थकाइ कम गर्ने उपाय - Newslaya
थकाइ लागिरहन्छ ? यस्ता छन्, थकाइ कम गर्ने उपाय
न्युजलय १९ असोज २०७८, मङ्गलबार ०९:२६ मा प्रकाशित
हरकोही मानिसलाई थकान महसुस हुन्छ। कडा मेहेनेत गर्नेलाई त थकान महसुस हुने नै भयो तर मेहेनेत नगरी एकै स्थानमा बसिरहे पनि थकाइ लाग्छ। जब शरीरमा उर्जा सकिन्छ तब शरीरले थकान महसुस गर्न थाल्छ। थकाइ कम गर्न निम्न उपाय अपनाउँदा राम्रो हुन्छ ।
मानिसहरु कामको चापका कारण पानी पिउन पनि बिर्सिन्छन्। केहीले तिर्दा लागेपछि मात्रै पानी पिउने गरेका हुन्छन्। तिर्खा लाग्‍नु भनेको शरीरले पानीको मात्रा असाध्यै कम महसुस गर्नु हो। त्यसैले तिर्खा नकुरेर पानी पिइरहन जरुरी हुन्छ। खेल चिकित्सक गडसन भन्छन्, ‘अक्सिजन र पोषक तत्व मांशपेशीमा पुर्‍याउन पनि पानीको जरुरी छ।’ यति मात्रै होइन, पानीको कमीले रगत बाक्लो बनाउँछ। मुटलाई कुशलतापूर्वक रगत पम्प गर्न रगतमा पानीको मात्रा पर्याप्त हुन जरुरी हुन्छ।
खाना शरीरका लागि इन्धन हो। जस्तो गाडीको इन्जिनमा शुद्ध तेल पर्‍यो भने सहज ढंगले कुद्छ। त्यसैगरी मानव इन्जिनमा पनि इन्धन सफा पर्नुपर्छ। विशेष गरी काम गरेर थाकेको र भोकाएको अवस्थामा खानेकुरा खाँदा होस पुर्याउनुपर्छ। दिउँसोको खाजामा एकदमैं धेरै तरल पदार्थ पाइने खाजा खाँदा थकाइ कम हुन सक्छ। मासुजन्य र कार्बोहाइडेड अधिक भएको खाजाले भोक त मेट्छ तर थकाइ बढाउन सक्छ।